Ntoni Abafazi Nyani kwi Budlelwane. HuffPost
Umfundi ke Qaphela: oku kulandelayo ngeposi ngu malunga kanti enye expensive into engena bume zobunzululwazi uphando. Umbuzo ‘Ntoni abafazi nyani.’ abanye abantu baya kuphendula ‘Imali,’ abanye baya kuphendula ‘na esihogweni uyayazi. kwaye abo a ngakumbi prurient mbindini ndiya kukuphendula ‘Ezisixhenxe i-intshi okanye ngaphezulu. ‘Umfundi ke Qaphela: Ubomi kwi-Boomer Lane kutshanje ibonise a commentary kwi ‘Enye Zinokuphathwa Andwebileyo Matshi: Umntu ke Isikhokelo Abafazi. ‘Yena sele uqaphele ukususela ngoko ukuba lo ihlala kude kube ngoku kwaye kude kwayo uninzi ethandwa kakhulu ngeposi ku-umhla, ebonisa kuye noba a ezinzima inzala kwii-abantu ke inxenye ukuqonda abafazi okanye ezinzima ukukholwa ukuba zinokuphathwa abafazi ingaba andwebileyo. Oku ngeposi babe ukukhonza ukuba demystify. Apha uyaya ne posa: A nzulu ipapashwe kwi-Personality kunye Namaqonga Psychology Bulletin kutshanje ifumanise ukuba xa abantu baba attracted ukuba mnandi-seeming abafazi phezu intlanganiso nabo, abafazi akazange ukuva ngendlela efanayo malunga abantu. Researchers ukususela Ngezifundo ka-Rochester, Ngezifundo ka-Eillinois e Urbana-Champaign kwaye Interdisciplinary Umbindi (i-IDC) Herzliya Kwasirayeli investigated a kunokwenzeka ndlela ocacisa ukuba kutheni abafazi namadoda differ zabo ngesondo reactions kunye receptive opposite-ngesondo bolunye uhlanga. Masibe yima apha okwethutyana kwaye remind ngokwethu ukuba kulo lonke ixesha, abafazi abaninzi zithe attracted ukuba ‘Umyalelo Boy. ‘Lo Umyalelo Boy ngu personified yi-motorcycle-riding yesikolo esiphakamileyo dropout othe ngakumbi tattoos kunokuba ingqondo iiseli. Iimifanekiso njenge ‘Imdaka Dancing,’ ‘mgqibelo Busuku Fever,’ kwaye ‘Wild Omnye’ bamzukise kwezabo iinguqulelo Engalunganga Boys. Umlinganiselo lufana: Umyalelo Boy (ngqo ngakumbi ubhideke misguided pitiful kunokuba engalunganga) zinokuphathwa ngenene zinokuphathwa ngenene zinokuphathwa kwaye elikhulu dancer. Mnandi kubekho inkqubela ziphantsi ngothando kunye naye, discovering kwi end ukuba bakhe nje ngala kakhulu kakhulu ukukhombisa. Yena uya emva apho weza evela kwaye marries a Bamayuda dentist. Ngoku emva zophando: Omnye aneshumi elinesibini undergraduate abafundi baba yahlula evenly phakathi amadoda nabafazi, kwaye abathathi-nxaxheba baba idityanisiwe i-seed engenamkhethe angeliso opposite-ngesondo abazimeleyo baya hadn ukuba kuhlangatyezwana nazo ngaphambili. Imizamo examined burgeoning ngesondo inzala kunye abathathi-nxaxheba’ kwi-zimvo malunga nenkqubo yolawulo olumanyanisiweyo imfuza ka-elide dating kunye yabo entsha ‘partners,’ kwenzeka njani abo zidityanisiwe zabo perceptions a personality trait imizamo unxulumano ‘ukuphendula ngokukhawuleza kwiimfuno zoluntu. ‘Njengoko kukhokela wafumana balibeke, ‘Ngesondo umnqweno thrives kwi inyuke intimacy kwaye ekubeni responsive sesinye eyona iindlela instill oku elusive sensation ngokuhamba kwexesha. ‘Kodwa oko researchers zifunyenweyo waba pretty darn surprising (kubo). Abantu zifunyenweyo responsive abafazi ngakumbi ubufazi kunye nabafana. Xa abafazi idibene a responsive umntu, baba ngaphantsi attracted ukuba loo mntu. Makhe kuzisa le ezantsi ukuya ngaphezulu ezisisiseko inqanaba kuba abo abafundi abakhoyo amehlo a bacon cheeseburger ngexesha ngabo ukufunda oku: i-lokuqala encounter, abantu liked mnandi abafazi. Abafazi wayecinga ukuba mnandi abantu baba blah. Yesibini nzulu kufuneka abathathi-nxaxheba ukuba libonisane noba a responsive okanye unresponsive umntu we-opposite sex, ngoko ke ezisebenza kunye nabo kwi-intanethi xa detailing a ngoku ingxaki zabo ubomi. I-imbono apha waba ukususa okunokwenzeka confounding iziqalelo ze kuphila loluntu ndibano (smiling, yesitalato attractiveness) ukubona ukuba babenako isolate njani kakhulu ukuphendula ngokukhawuleza kwiimfuno zoluntu okanye niceness idlalwe kwi utsalekoname. Kwakhona, abantu kwi-nzulu wayecinga responsive kwaye attentive abafazi baba ngaphezu nabafana njengoko enokwenzeka partners, ngexesha abafazi zifunyenweyo abantu nabo efanayo traits kuba into yucky, baya inyathelwe kwaye kuya stuck ezantsi zabo izihlangu. Lwesithathu kwaye zokugqibela nzulu zaziswe kwi-iphepha wafuna ukuba uvavanyo ngokukodwa nokuba ndlela ngawo ‘ukuphendula ngokukhawuleza kwiimfuno zoluntu’ khuthazwa abantu ukumsukela budlelwane nabanye waba, eneneni, ngesondo arousal. Ukwenza njalo, baya replicated yesibini nzulu, kodwa wongeza othile komlinganiselo ka-ngesondo utsalekoname. Baye ke ifumanise ukuba xa abantu zifunyenweyo abafazi ukuba abe responsive, oko kukhokelele a oluphakamileyo ngesondo arousal phakathi kwabantu. Ukuba, ngokulandelelanayo kukhokelele ngakumbi umnqweno kuba budlelwane. Enye isiphumo: Abantu zifunyenweyo ukuphendula ngokukhawuleza kwiimfuno zoluntu ukuba abe sexually enqwenelekayo. Abafazi agcina zabo panties yavakalisa kule ndawo. Researchers ingaba? awuqinisekanga ukuba kutheni abafazi ingaba ngaphantsi sexually attracted ukuba responsive bolunye uhlanga kunokuba abantu.
LBL scoffs ngomhla theories. LBL unako ukugcina ezi researchers ezininzi ixesha trouble. Yena sele yakhe kunye inkumbulo njengoko ukuba kutheni abafazi abaninzi ingaba attracted ukuba umyalelo elusive unapproachable abantu.
I-ultimate coup ayi ifumana i-mnandi, sweet guy ukuba njenge nani. Yena likes wonke umntu, akunjalo. I-obhedu umsesane ingxamele umntu ukuba njenge nani abo ayifumaneki okanye approachable. Yena rides kwi kwi motorcycle okanye uhamba phezu kwi-wearing a wedding lamasoldati, okanye ayi ethabatha yakhe meds. Yena ke scary kwaye ezinobungozi kwaye kanye kanye yintoni mom walumkisa kuthi malunga.
Kwaye sihamba lilapha
I-imbono, kunjalo, ukuba uya kuwa ngothando kunye nathi kwaye uyeke riding i-bike okanye wearing i-wedding lamasoldati, okanye ndiya qala ethabatha yakhe meds. Ngamanye amazwi, siza tshintsha kuye babe ngakumbi na abantu thina weren khange attracted ukuya kwindawo yokuqala. Uninzi abafazi baqonde phambi inde kakhulu ukuba mhlawumbi Engalunganga Boy akusebenzi khange enjalo olulungileyo emva zonke, kwaye baya end phezulu kunye Okulungileyo Umntu. Abanye kwenza career chasing emva Engalunganga Boy, idla kunye predictable iziphumo. Inani elincinane end phezulu kunye Engalunganga Boy, ngubani ngokwenene ingaba kuba intliziyo yegolide, nakanjani budlelwane imisebenzi. Kakhulu, kakhulu inani elincinane. Kwi-Hollywood kwaye yokwenene ebomini, ezi Engalunganga Boys abo benza okulungileyo ukwenza njalo ngenxa yokuba ekugqibeleni khona i-ubudala, awathi ngabo ngokulula kakhulu ukudinwa ukuqhubeka ngokwenza oko zithe ukwenza oko. Settling phantsi uba bonke abo bamele capable. Congrats kwi-mtshato, George Clooney. Impendulo umbuzo ‘Ntoni abafazi nyani.’ ukuba, ekugqibeleni, sonke ufuna ukuba abe wayemthanda kwaye valued. Thina nje kungathatha iindlela ezahlukeneyo ukufumana apho okanye zange get apho. Ukuba thina aren khange lucky, sibe kuwa ngaphandle ezininzi motorcycles kule nkqubo. Ukuba sisebenzisa, sibe kuba ngenene swell dancers
Isifrentshi Dating Inkonzo - dating kunye beautiful abafazi ukusuka kwi-France →